Onyankopɔn twee atemmu sekan fii ne bɔha mu (1-17)
Babilon hene bɛtow ahyɛ Yerusalem so (18-24)
Israel obirɛmpɔn mumɔyɛfo no, wobeyi no afi hɔ (25-27)
“Tu ahenkyɛw no” (26)
“Kosi sɛ nea ɛyɛ ne dea no bɛba” (27)
Wɔbɛtwe sekan wɔ Ammonfo so (28-32)
21 Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ: 2 “Onipa ba, fa w’ani kyerɛ Yerusalem, na ka nsɛm gu kronkronbea no so, na hyɛ nkɔm tia Israel asaase. 3 Ka kyerɛ Israel asaase sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ, me ne wo wɔ asɛm, na mɛtwe me sekan afi ne bɔha* mu+ na matwa ɔtreneeni ne ɔbɔnefo nyinaa afi wo so. 4 Esiane sɛ metwa ɔtreneeni ne ɔbɔnefo afi wo so nti, mɛtwe me sekan afi ne bɔha mu aba ɔhonam* nyinaa so, fi anaafo kosi atifi. 5 Na nnipa nyinaa behu sɛ, me Yehowa na matwe me sekan afi ne bɔha mu. Ɛrensan nkɔ ne bɔha mu bio.”’+ 6 “Onipa ba, fa ahopopo* si apini. Fa awerɛhow si apini wɔ wɔn anim.+ 7 Sɛ wobisa wo sɛ, ‘Dɛn nti na woresi apini?’ a, ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Amanneɛbɔ bi ntia.’ Na ɛbɛba mu, na ehu nti koma nyinaa bɛnan, nsa nyinaa bedwudwo, honhom nyinaa bɛbotow, na nsu bɛteɛ afa nkotodwe nyinaa ho.*+ ‘Hwɛ, ɛbɛba mu ɔkwan biara so; ɛbɛba mu,’ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 8 Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 9 “Onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Ka sɛ, ‘Sekan!+ Wɔasew sekan ano, na wɔatwiw ho. 10 Wɔasew ano sɛ enkunkum nnipa pii; wɔatwiw ho ma etwa yerɛwyerɛw.’”’” “Ɛnsɛ sɛ yedi ahurusi anaa?” “‘Ɛbɛpo* m’ankasa me ba ahempoma,+ sɛnea ɛpo dua biara no anaa? 11 “‘Wɔde ama sɛ wontwiw ho na wɔmfa nsa nkura mu. Wɔasew sekan yi ano, na wɔatwiw ho sɛ wɔmfa nhyɛ ɔbrafo* nsam.+ 12 “‘Onipa ba, su na twa adwo,+ efisɛ wɔatwe sekan wɔ me man so; wɔatwe wɔ Israel abirɛmpɔn nyinaa so.+ Wɔde sekan bekum wɔne me man nyinaa. Enti di awerɛhow na bɔ wo srɛ ho. 13 Wɔasɔ ahwɛ,+ na sɛ sekan no po ahempoma no a, dɛn na ebesi? Ɛrenkɔ so* ntena hɔ bio,’+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni. 14 “Onipa ba, hyɛ nkɔm na bɔ wo nsam, na ka no mprɛnsa sɛ ‘Sekan!’ ‘Sekan!’ ‘Sekan!’ Ɛyɛ nnipa a wɔakunkum wɔn no sekan, nnipa pii a wɔakunkum wɔn no sekan na atwa wɔn ho ahyia.+ 15 Ehu bɛma wɔn koma anan,+ na wɔn mu pii bewuwu wɔ wɔn kurow apon ano; mede sekan bekunkum wɔn. Ampa, ɛho retwa yerɛwyerɛw, na wɔatwiw ho sɛ enkunkum nnipa! 16 Sekan, twa kɔ nifa! Na twa kɔ benkum! Baabiara a wɔde w’ani bɛkyerɛ biara, twa kɔ hɔ! 17 Afei mɛbɔ me nsam na m’abufuw ano abrɛ ase.+ Me, Yehowa, na maka.” 18 Na Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ: 19 “Onipa ba, yɛ akwan abien na Babilon hene sekan mfa so mmra. Ma abien no nyinaa mfi asaase baako so, na yɛ akyerɛkyerɛkwan* fa si nkurow abien no nkwanta so. 20 Siesie ɔkwan baako ma sekan no nkɔ Ammonfo kurow Raba mu,+ na baako nso nkɔ Yerusalem kurow a wɔabɔ ho ban no mu+ wɔ Yuda. 21 Babilon hene gyina nkwanta no so, akwan abien no nkwanta so, sɛ ɔrebisa n’anyame. Ɔwosow agyan no. Obisa n’ahoni* nea ɔnyɛ; ɔhwehwɛ aboa mmerɛbo mu.* 22 Ɔhwɛɛ ne nsa nifa mu hui sɛ ɛsɛ sɛ ɔde n’ani kyerɛ Yerusalem. Ɛkyerɛɛ no sɛ ɔnhyehyɛ mfiri a wɔde dwiriw afasu, ɔnka sɛ wonkunkum wɔn, ɔnhyɛn ɔko torobɛnto, ɔnhyehyɛ mfiri a wɔde bedwiriw kurow no apon agu, onnye ho ban nhyia na ɔnto akoban.*+ 23 Na ɛbɛyɛ wɔn* a wɔaka ntam akyerɛ wɔn*+ no ani so sɛ nkɔmhyɛ no yɛ atoro. Nanso ɔbɛkae wɔn bɔne na wakyere wɔn.+ 24 “Enti nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni, ‘Moama mo mmarato ho ada hɔ ama wɔahu mo bɔne wɔ biribiara mu, enti wɔakae mo bɔne. Seesei a wɔakae mo no, wɔbɛkyere mo* akɔ.’ 25 “Israel obirɛmpɔn omumɔyɛfo a woapira opira a ɛde wo bɛkɔ owu mu,+ wo bere aso, bere a ɛsɛ sɛ wɔtwe w’aso korakora no adu. 26 Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: ‘Yi abotiri no na tu ahenkyɛw no.+ Ɛrenyɛ sɛnea ɛte no bio.+ Nea abrɛ ase no, ma so;+ na nea ɛwɔ soro no, brɛ no ase.+ 27 Ɔsɛe, ɔsɛe, ɔsɛe na mede bɛba so. Ɛrenyɛ obiara dea kosi sɛ nea ɛyɛ ne dea no bɛba,+ na mede bɛma no.’+ 28 “Onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka afa Ammonfo ne wɔn adapaatwa ho ni.’ Ka sɛ, ‘Sekan! Wɔatwe sekan a wɔde bekum; wɔatwiw ho sɛ enni nam na ɛho ntwa yerɛwyerɛw. 29 Wɔka anisoadehu a ɛnyɛ nokware, na wɔhyɛ nkɔm a ɛyɛ atoro kyerɛ wo, nanso wɔde wo bɛto wɔn a wɔakunkum wɔn a wosum hɔ no* so. Wɔyɛ abɔnefo a wɔn bere aso, na bere a ɛsɛ sɛ wɔtwe wɔn aso korakora no adu. 30 San fa hyɛ ne bɔha mu. Faako a wɔbɔɔ wo, asaase a wɔwoo wo wɔ so no so na mebu wo atɛn. 31 Mehwie m’abufuw agu wo so. Mɛbɔ m’anibere gya mu agu wo so, na nnipa a wɔn tirim yɛ den a wɔn adwuma ne sɛ wɔsɛe ade no, mede wo bɛhyɛ wɔn nsa.+ 32 Wɔde wo bɛsɔ gya;+ wobehwie wo mogya agu asaase no so, na wɔrenkae wo bio, efisɛ me, Yehowa, na maka.’”
^ Nt., “fa wo sisi a ɛrepopo.”
^ Kyerɛ sɛ, “Yehowa sekan bɛpo.”
^ Anaa “onipakumfo.”
^ Anaa “Ahempoma no renkɔ so.”
^ Nt., “yɛ nsa.”
^ Nt., “ne terafim.”
^ Ná wɔde yɛ nyankomade.
^ Kyerɛ sɛ, nnipa a wɔwɔ Yerusalem.
^ Ɛbɛyɛ sɛ Babilonfo.
^ Nt., “wɔde nsa bɛkyere mo.”
^ Nt., “wɔn a wɔakunkum wɔn a wosum hɔ no kɔn.”